Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame oo qaraxii maanta ku eedeeyay hey’adda NISA | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame oo qaraxii maanta ku eedeeyay hey’adda NISA
Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame oo qaraxii maanta ku eedeeyay hey’adda NISA
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir ahna musharax u taagan jagada madaxtinimo ee dalka Abdirahman Abdishakur Warsame ayaa hey’ada Nabada Sugida ee NISA ku eedeeyay mas’uuliyada qaraixii maanta ka dhacay Elite Hotel.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooga ayuu kaga tacsiyeeyay dadkii Qaraxii maanta ku geeriyooday asigoona masuuliyada qaraxaasi dusha uga tuuray Hey’ada NISA oo uu ku tilmaamay mid gudan weysay waajibaadkeedii.
Hadaba halkaan hoose kaga bogo qoraalka Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir
“Waxaan si xooggan u canbaaraynayaa weerarka ay kooxda argagexisada Al-Shabaab ku qaadeen Hotel Elite.
Allaha u naxariisto dadkii ku nafwaayey, Allahana caafiyo intii ku dhaawacantay. Maalmahan danbe weerarrada iyo qaraxyada argagexisada way sii kordhayaan. Way cadahay fashilka hay’adda NISA iyo xil gudasho la’aanta taliska hay’adda.
Haddaba, waxaan ka dalbaneynaa Madaxweynaha in uu dib u habeyn dhinaca hoggaanka ah ku sameeyo NISA, danta shacabka ka hormariyo danta saaxibtinnimo ee kala dhaxaysa taliyaha NISA.”